बादल विप्लव सम्वन्धको बारेमा के भन्छन् राजनीतिज्ञ ? – www.agnijwala.com
बादल विप्लव सम्वन्धको बारेमा के भन्छन् राजनीतिज्ञ ?
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाइ नियालेर हेरेपछि राजनीतिक बृत्तमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादल र हाल भुमिगत राजनीति गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लकवको सम्वन्धको बारेमा चर्चा हुन थालेको छ । अर्धभुमिगत आन्दोलन गरिरहेका विप्लवको दल नेकपालाइ प्रतिवन्ध लगाउदै देख्ने वित्तिकै गोली हान्नु भन्ने निर्देशन सुरक्षाकर्मीलाइ दिएपछि राजनीतिज्ञहरुले बादल विप्लव सम्वन्धको बारेमा बहश गर्न थालेका छन । कुनै समय प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा कुममा कुम जोडेर संगै काम गरेका बादल र विप्लव यतिवेला आमनेसामने भएका छन । नियतिले उनीहरु मध्ये एकले पार्टीलाइ प्रतिवन्ध लगाउने र अर्कोलाइ त्यसको प्रतिकार गर्ने ठाउँमा राखिदिएको छ । इतिहास कतिसम्म क्रुर भएको छ भने २०५९साल बैशाख १२ गते सरकारले तत्कालिन माओवादीका नेताहरु वावुराम भटटराइ,प्रचण्ड र मोहन वैद्यलाइ पक्राउ गर्नेलाइ ५० लाख पुरस्कार र उनीहरुको बारेमा सुराकी दिनेलाइ पचास प्रतिशत सुराकी खर्च दिने उर्दी नै जारी गरेको थियो । त्यतिवेला बादल र विप्लव एकै दलमा थिए । तर त्यस यता आज १६ बर्षमा समय बदलियो,परिस्थिति बदलियो,पात्र बदलियो तर प्रवृत्ति भने उहि रहेको छ । हिजो टाउकाको मोल तोक्ने शेरवहादुर देउवा विपक्षी दलका नेता छन भने उतिवेला ससस्त्र युद्ध गर्ने प्रचण्ड बादल सत्तामा छन र त्यसकै एक भंगालो सम्हालेका विप्लवको दललाइ भने प्रतिवन्ध लागेको छ ।
माओवादी आन्दोलनमा युवा र क्रान्तिकारी युवाको पहिचान बनाएका नेत्रविक्रम चन्दलाइ नजिकबाट चिन्नेहरु उत्साही,जागरुक र हतियारबन्द आन्दोलनको लागि ब्यग्र नेताको रुपमा चिन्दछन । अन्य नेताको तुलनामा युवा भएकोले जोशीला चन्द भाषणवाजीमा पनि तेज छन । एकिकृत जनक्रान्ति भन्दै उनी अहिले युद्धमा होमिएका छन ।
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादीमा प्रवेश गर्दा बादल र विप्लव एकै ठाउँ थिए । त्यतिवेला यी दुइ नेताको विचमा सैद्धान्तिक विमति थियो । एकले अर्कोलाइ प्रतिस्पर्धी ठानिरहेका थिए । यहिबेलामा मोहन वैद्यको धारको विपरित विप्लवले तत्काल हतियारबन्द आन्दोलनको प्रस्ताव गरे भने मोहन वैद्यको दल छाडने बेलामा बादलले राष्ट्रिय समाजवाद भने ।
यहि मुद्धालाइ अगाडि तेर्साएर बादलले पछि पार्टी नै छाडे र प्रचण्डको नेतृत्व हुदै अहिले एमालेसंग मिलेर नेकपा भएका छन । लामो समय बादल र विप्लवसंग रहेका र हाल मोहन वैद्यको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीमा रहेका सीपी गजुरेलको शब्दमा भन्ने हो भने बादल सोच र दर्शनमा अब्बल होइनन । उनी लेख पढ र बहश भन्दा पनि अन्य काममा रुची राख्ने खालका नेता हुन । तर,विप्लव भने जोशिला युवा मात्र होइन अलि उग्र नेता पनि हुन ।
सीपीका अनुसार पछिल्लो समय बादल र विप्लवको कुरा मिल्न छाडेको थियो । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपामा प्रचण्डलाइ छाडेर सवैभन्दा पछि वादल आएका हुन । यसअघि नै विप्लवहरु वैद्यसंग आइसकेका थिए । वैद्यसंगै रहदा बादलले सवैभन्दा पहिला प्रचण्डलाइ भर्खर आफुले छाडेको पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाइ लालगद्धार भनेर आरोप लगाए । तर पछि तिनै प्रचण्डसंग नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरे । तर बैद्य माओवादीबाट बादल भन्दा पहिला नै विप्लव निस्किएका थिए । उनी हतियारबन्द आन्दोलनमा वैद्य र गजुरेल नजाने पाएपछि युवाहरु समेटेर वाहिरिएका थिए । यसपछि दुवै नेता आमनेसामने भएका थिए । एकले अर्कोलाइ आरोप प्रत्यारोप यतिवेला पनि चलि नै रहयो । बादल र विप्लवविच फाटो ल्याउने काम यहा पनि भयो ।
मानिसहरुले वादल विप्लव सम्वन्धको बारेमा केलाउन यतिवेला देखि नै थालेका हुन । अझ सीके राउत र सरकारको विचमा सम्झौता भएकै दिन प्रधानमन्त्रीले विप्लवलाइ लुटेरा समुह भन्नु र यसको भोलिपल्ट गृहमन्त्री रामवहादुर थापा बादलले आपराधिक समुह भनेपछि बादल र विप्लव सम्वन्ध झन छताछुल्ल भएको छ । अहिले विप्लव समुहलाइ प्रतिवन्ध नै लगाएपछि अब यी कुनै बेलाका सहयात्री अब आमनेसामने भएका छन ।